इटालीले अस्ट्रेलियामा कोरोना खोप निर्यातमा रोक लगायो :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
इटालीले अस्ट्रेलियामा कोरोना खोप निर्यातमा रोक लगायो एस्ट्राजेनिकासँग विवाद किन?
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १८:३२:४६
बिबिसी- इटाली सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोप अस्ट्रेलिया निर्यातमा रोक लगाएको छ।
कम्पनीले युरोपेली संघ ईयुलाई दिने वाचा गरे अनुसार खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि इटालीले उक्त खोप अस्ट्रेलिया निर्यातमा रोक लगाएको हो। उक्त निर्णयले इटालीस्थित एस्ट्राजेनिकाको कम्पनीमा निर्मित २ लाख ५० हजार खोप पठाइने योजना प्रभावित भएको छ।
युरोपेली संघ इयुको नयाँ नियम प्रयोग गर्दै कदम चाल्ने इटाली पहिलो युरोपेली राष्ट्र बनेको छ। उक्त नियममा यदी कम्पनीले ईयुलाई दिने वाचा गरे अनुसार खोप उपलब्ध गराउन नसकेमा उसका उत्पादन निर्यात गर्न रोक्न सकिने प्रावधान छ।
अष्ट्रेलियाले कोरोना विद्धरुको एक खेप खोप नआउँदैमा आफ्नो खोप अभियानमा कुनै असर नगर्ने बताएको छ। रिपोर्ट अनुसार युरोपेली आयोगले इटालीको उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेको बताइएको छ।
एस्ट्राजेनिका, युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्रहरुलाई वर्षको पहिलो तीन महिनामा दिने भनिएको सम्झौताको ४० प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छ। कम्पनीले उत्पादनमा समस्या यसको कारण भएको बताएको छ।
जनवरीमा इटालीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुसेपे कोंटीले एस्ट्राजेनिका र फाइजरको तर्फबाट हुने खोपको आपूर्तिमा हुने ढिलाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए। उनले दुवै कम्पनीहरुले करार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए।
खोप अभियानको सुस्त गतिका कारण ईयुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। गत वर्षको जुन महिनामा स्थापित ईयु खोप योजना अन्तर्गत उसले सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
इटाली सरकारको उक्त निर्णयपछि युरोपेली संघ या एस्ट्राजेनिकाको तर्फबाट कुनै आधिकारिक बयान आएको छैन। अस्ट्रेलियाले पछिल्लो सातादेखि खोप अभियान सुरु गरेको थियो। अस्ट्रेलियाले हाल फाइजर/बायोएनटेक खोप लगाइरहेको छ। शुक्रबारदेखि अस्ट्रेलियामा एस्ट्राजेनिकाको खोप लगाउने कार्यक्रम थियो।
अस्ट्रेलियाले पहिले नै तीन लाख खोप प्राप्त भइसकेको र आगामी महिनादेखि स्थानीय स्तरमा उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको बताएको छ।
अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हंटले भने, ‘घरेलु उत्पादन प्रति साता १० लाख खोपबाट सुरु हुनेछ। मार्चको अन्तिमबाट यसको डेलिभरी सुरु हुनेछ।’
एस्ट्राजेनिकासँग विवाद किन?
पछिल्लो वर्ष अगस्टमा युरोपेली संघले एस्ट्राजेनिकासँग खोपको ३० करोड डोजको लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसमा १० करोड खोप थप लिन सकिने पनि विकल्प थियो। तर यसको सुरुवातमा ब्रिटिश–स्वीडिश कम्पनीले नेदरल्याण्डस र बेल्जियमको आफ्नो प्लांट्समा उत्पादन ढिलो हुने बताएका थिए।
मार्चको अन्तिमसम्म १० करोड खोपको ठाउँमा अब युरोपेली संघलाई मात्र चार करोड खोप प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। आफ्नो सम्झौताबाट कम्पनी पछि हटेको युरोपेली संघको आरोप छ। यही विवादका कारण युरोपेली संघले निर्यातमा नियन्त्रणको घोषणा गरेको थियो।